Ihe Baịbụl Kwuru Ò Gosiri na Mmadụ Nwere Ikike Ikpebiri Onwe Ya Ihe?| Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bislama Bissau Guinean Creole Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kekchi Kikamba Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Maya Mexican Sign Language Moore Myanmar Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Romanian Russian Réunion Creole Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wolof Xhosa Yoruba Zulu
Chineke kere anyị ka anyị jiri aka anyị na-ekpebiri onwe anyị ihe, ọ bụghị ka yanwa na-ekpebiri anyị ihe ma ọ bụ ka akara aka na-edu anyị. Ihe a Chineke mere gosiri na ọ na-akwanyere anyị ùgwù. Lee ihe Baịbụl kwuru.
Chineke kere mmadụ n’oyiyi ya. (Jenesis 1:26) Anyị adịghị ka ụmụ anụmanụ na-enweghị ọgụgụ isi, kama e kere anyị n’oyiyi Chineke. Ọ bụ ya mere anyị ji ahụ ndị ọzọ n’anya ma na-ekpe ikpe ziri ezi. Otú ọzọ anyị sikwa yie Onye okike anyị bụ na anyị nweere onwe anyị ikpebiri onwe anyị ihe.
Ọ bụ anyị ka ọ kacha dịrị n’aka ikpebi otú ndụ anyị ga-adị n’ọdịnihu. Baịbụl na-agwa anyị ka anyị ‘họrọ ndụ site n’ige ntị n’olu Chineke,’ ya bụ, ịhọrọ idebe iwu Chineke. (Diuterọnọmi 30:19, 20) Chineke agaghị agwa anyị ụdị ihe a ma a sị na anyị enweghị ikike ikpebiri onwe anyị ihe. Ọ bụrụkwa na Chineke amarachaa na anyị enweghị ikike ikpebiri onwe anyị ihe, na-agwa anyị ka anyị họrọ ndụ, ọ ga-adịzi ka ọ̀ bụ onye obi tara mmiri. Chineke anaghị amanye anyị ka anyị mee ihe ọ chọrọ, kama ọ na-arịọ anyị arịrịọ, sị: “A sị nnọọ na ị ga-aṅa ntị n’ihe m nyere n’iwu! Mgbe ahụ, udo gị ga-adị nnọọ ka osimiri.”—Aịzaya 48:18.
Ọ bụghị akara aka na-eme ka ihe gaziere mmadụ ma ọ bụ ka ihe ghara ịgaziri ya. Ị chọọ ka ihe gaziere gị, ị ga-agbasi mbọ ike. Baịbụl sịrị, “Ihe niile ruru gị aka ime, jiri ike gị dum mee ha.” (Ekliziastis 9:10) Ọ sịkwara na “atụmatụ onye dị uchu aghaghị iweta uru.”—Ilu 21:5.
Anyị ikpebiri onwe anyị ihe bụ onyinye magburu onwe ya Chineke nyere anyị, n’ihi na ọ na-eme ka anyị jiri aka anyị kpebie iji ‘obi anyị dum’ hụ ya n’anya.—Matiu 22:37.
Ọ́ bụghị Chineke na-ekpebi otú ihe niile si aga?
Baịbụl sịrị na Chineke bụ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile nakwa na o nweghị onye ike ya na ya hà. (Job 37:23; Aịzaya 40:26) Ma, Chineke anaghị eji ike ya ekpebi otú ihe niile si aga. Dị ka ihe atụ, Baịbụl sịrị na Chineke “jidere onwe” ya mgbe ndị Babịlọn nọ na-emejọ ndị Izrel. (Aịzaya 42:14) Otú ahụ ka ọ dịkwa taa. Chineke kpebiri ịhapụgodị ndị họọrọ ịna-eme ndị ọzọ ihe ọjọọ. Ma, ọ gaghị ahapụ ha ruo mgbe ebighị ebi.—Abụ Ọma 37:10, 11.
Chineke Otú E Si Ebi Ndụ na Akparamàgwà Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Baịbụl Kwuru Ò Gosiri na Mmadụ Nwere Ikike Ikpebiri Onwe Ya Ihe? Ọ̀ Bụ Chineke Na-ekpebi Ihe Ị Ga-abụ?
ijwbq isiokwu 44